Ntụziaka maka gbọmgbọm na mkpụrụ - Zlowdaj.si
Ulo Mma na Ike Ahụ ike Ntụziaka maka bọmbụ mkpụrụ
Ntụziaka maka bọmbụ mkpụrụ
Ọnwa Nke Anọ 4, 2020
You na-atọ ụtọ? mkpụrụ bọmbụ na-amasị gị! Mgbe anyị nọ n'ụlọ, anyị na-eri nri ka mma
N'oge mgbe anyị ga-arapara n'ụlọ anyị wee pụọ naanị iji rụọ ọrụ na mgbe emechara, ọ bụ oge imepụta. Ma nke ahụ ma otu na kichin. Agbanyeghị na ị nwere ike iche na ịme achịcha ma ọ bụ achịcha dị iche iche enweghị isi maka gị, anyị na-etinye ya n’obi gị ịnwa ihi ụra bọmbụ mkpụrụ dị ka uzommeputa n'okpuru. Anyị mere nke ọma!
1 / 2kg ntụ ọka (anyị ji ngwakọta nke ọcha na osikapa)
180ml nke mmiri ara ehi
7g nke yist
120ml utoojoo ude
5 tablespoons mmanụ (70-80 ml)
mkpụrụ nke ị họọrọ (anyị ji flax na sesame)
Kpoo ntụ ọka ahụ na efere ma mee ohere n'etiti maka shuga na mmiri ara ehi (adịla oyi), tinye yist akọrọ, bido ma chere otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu awa ka mgwakota agwa ahụ bilie.
Ekem tinye ude na nnu, gbue na anụ ahụ achọrọ (nyere onwe gị aka na obere ntụ ọka ma ọ bụrụ na mgwakota agwa dị oke mmiri), nke na-enye gị ohere ịme achịcha.
Mgbe ahụ kpuchie efere ahụ na akwa akwa wee hapụ ịrị elu maka 1h.
Mgbe mgwakota agwa ahụ dị okpukpu abụọ, kee ya n'ime akụkụ ya ma jiri nlezianya kpokọta bọọlụ ọ bụla n'otu n'otu ma mepụta obere bọmbụ. Ọnụ ọgụgụ nke ndị a ga-adabere na onye na-eme achịcha, anyị mebere 11 n'ime ha.
Weta mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ na-agbanye bọmbụ gị n'ime ya. Mgbe ahụ hapụ ha ka ha bilie ọzọ nkeji 20 ma ọ bụ nkeji karịa.
Ka ọ dịgodị preheat oven ruo 180 ogo, na tupu ị ghee ntụ ọka ahụ kootu na akwa akwa na mmiri ara ehi. N'ikpeazụ, n'ezie, fesaa ya na mkpụrụ ị họọrọ ma ghee ọkara otu awa.
A aghụghọ nke softer bọmbụ! Ichichaa ya, kpuchie ha akwa mmiri mmiri ma hazie ka ha zuru ike ihe dika nkeji iri rue iri na ise.
Dabere na 4 Review (s)
Ntụziaka maka ogbunigwe
Nsen na adị ndụ
Kedu ihe ị ga-eri maka ahụike na ahụike?
Ahụhụ Gluten ma ọ bụ enweghị gluten
Ogbaji - 18 March, 2018 0
You nwetụla mgbe ị na-eche ihe gluten allergy bụ ma ọ bụ ma eleghị anya ihe gluten bụ? Ndị niile na-arịa ọrịa gluten anaghị enwe obi ụtọ ...
Ma ọgwọ ọrịa nke ụgbụ?
Ahụ ike 17 March, 2019
Kedu otu esi achọta onye òtù ọlụlụ n'oge nsogbu nke corona?
Mma na Ike Ọnwa Iri na Otu 27, 2020
Ahụ ike na mmega ahụ
Ahụ ike Ọnwa Abụọ 17, 2017
Carbohydrates na ihe kpatara ha ji dị mkpa
Ahụ ike Ọnwa Isii 6, 2018
Ihe eji eme ulo! | Lemọnade na strawberries
Ogbaji - Ọnwa Nke Anọ 5, 2020 0